VOR / LOC fomba fiasa amin'ny Flight Simulator | Vaovao momba ny dia
Fomba VOR / LOC ao amin'ny Flight Simulator
Blog Aereoo | | fiaramanidina
1 Fanatonana amin'ny VOR na LOC (Locator).
1.1 CANPA (fomba fiasa marina momba ny zoro tsy tapaka)
2 Ny VOR sy LOC
3 Ny fomba VOR / DME mankany amin'ny runner ESSA 01
4 Fanamoriana fiaramanidina mandeha ho azy sy fanampiana.
4.1 Fomba voalohany
4.2 Niorina ary nandalo 6 km DME.
4.3 Tonga amin'ny MDA.
Fanatonana amin'ny VOR na LOC (Locator).
CANPA (fomba fiasa marina momba ny zoro tsy tapaka)
Ny fomba fanao izay tsy ahazoan'ny mpanamory fiaramanidina fotsiny ny sisiny dia antsoina hoe "fomba tsy mazava"
Ity fomba fiasa ity »dia tanterahina ho toy ny« Constant Angle Precision Approach »
CANPA, mba hitovizany amin'ny fihazakazahana fomba ILS.
CANPA dia alefa amin'ny alàlan'ny fomba DME na toy ny fomba fanao amin'ny zoro efa voafaritra mialoha
ny zoro fiaviana tsy miova dia navoaka tao amin'ny MDA "Minimum Descent Altitude".
Raha mifandray amin'ny MDA ianao (amin'ny fidirana ao anatiny), dia azo atao ny miantsona; raha tsy manana fifandraisana amin'ny MDA ianao
lap lap manodidina (sorena) tsy maintsy vonoina.
Ny VOR sy LOC
Ny fomba VOR dia mifototra amin'ny VOR miorina amin'ny toerana akaiky ny lalamby. Ny làlana mankany amin'ny tongotra manakaiky dia tsy hitovy amin'ny mpikaroka ILS amin'ny làlambe iray ihany. Indraindray mankany amin'ny tongotry ny
ny fomba fiasa dia tsy hitovy. Any amin'ny ENV any avaratr'i Norvezy dia 24º. Izany dia hiteraka ny haavon'ny farany ambany.
Ny fomba fiasa LOC (amin'ny localizer) dia mifototra amin'ny ILS, fa tsy misy GP (Glide Path).
Samy fomba fanatanterahana ireo fomba roa ireo.
Ny fomba VOR / DME mankany amin'ny runner ESSA 01
ATC dia hanome anao vector matetika amin'ny alàlan'ny radar hanakanana lohateny 30º mankany amin'ny lohan'ny tongotra manakaiky.
mankany amin'ny VOR. Raha sanatria tsy misy radara, ny fomba fiasa dia ho fomba fiasa mihodina na DME Arc.
Ny lohateny mankany amin'ny tongotra manakaiky dia 003º, raha ny mpamantatra ILS dia amin'ny 007º.
Amin'ny faran'ny tabilao IAL dia misy kisarisary mitsivalana ny fomba fiasa.
2500ft mankany DME 8 (8 DME miles) 1510ft ka hatramin'ny DME 5 ary 590ft (tongotra) farafahakeliny.
Eo ankavia dia misy ny sarin'ny latabatra izay manome torohevitra momba ny haavon'ny toerana samihafa izay hanome fidinana misy orona amin'ny 3.2º.
D5 dia tsipika ary manondro haavon'ny "HARD LEVEL" henjana. Ity no haavon'ny haavo ambany indrindra amin'izany.
Ny GS / KT dia ny GREUND SPEED amin'ny knot ary ny ROD dia ny Range Descent.
Fanamoriana fiaramanidina mandeha ho azy sy fanampiana.
Ny NAV 1 dia napetraka amin'ny fahita VOR an'ny ARL 116.00. Ny dingana mankany amin'ny tongotra manakaiky dia 003º.
Ny NAV 2 dia napetraka ihany koa amin'ny 116.00
Ny ADF dia napetraka amin'ny hafanan'ny NDB OHT 370
ny hafainganam-pandeha dia 210kts ary ny haavony dia 2500ft mbola eo ambonin'ny vector radar miaraka amin'ny lohateny 340º.
Ny autopilot dia napetraka ao amin'ny VOR an'ny Locator ary hisambotra azy.
Ny A / T (Auto Throtle) ​​dia mitazona ny hafainganana.
Fotoana miadana ary miomana amin'ny fidinana. Zava-dehibe ny miadana ary manana ny fikirakirana fipetrahana (A / C) alohan'ny hahatratrarana 8 km DME. Tena hampihena be ny asa izany ary ho marina kokoa ny hafainganam-pandeha vinavina.
Niorina ary nandalo 6 km DME.
Ny fanahafana mitovy amin'ny Autopilot (A / P).
Rivotra avy any ankavia.
358º ny lohateny ary 136kts ny hafainganam-pandehan'ny tany.
Ny fanjaitra ADF dia manomboka mihodina miankavia, manakaiky ny marika OHT ivelany ianao.
Tandremo ny haavon'ny sarotra amin'ny 5 kilometatra DME.
Haingam-pandeha fototra mitsangana dia 800ft. Afaka miova ny rivotra mandritra ny fidinana. Raha sendra ambany noho ny mahazatra ianao, ahenao ny hafainganam-pandeha ho 700ft ary zahao ny hahavony anao amin'ny famantarana DME manaraka. Mazava ho azy fa fomba iray hafa hifehezana raha manana halavirana bebe kokoa amin'ny mombamomba anao ianao.
Tonga amin'ny MDA.
Voafehy ve ny zava-drehetra?
Ianao ve no mahita ny lalan-kely na ny jiro manatona?
Ka - esory ny autopilot (A / P) ary ataovy irery ny ambiny. Tsy azo atao ny miantsona irery amin'io karazana fomba io. Ny Auto Throtle (A / T) dia azo ampiasaina amin'ny lalana rehetra midina.
Hanana ny lalana eo ankavananao ianao, ny ampahany dia noho ny lalana mihazakazaka tongotra fa koa noho ny tsy fitoviana. Ny lohateny dia 358º ary ny lalana dia 007º.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Fomba VOR / LOC ao amin'ny Flight Simulator
Peroviana Marinera, dihin'ny fitiavam-pitiavana
Fanamby ho an'ny Airbus